नोकियाका सबै नयाँ स्मार्टफोन नेपाली बजारमा, कुन फोनको मूल्य र फिचर्स कस्तो छ?
शनिबार, असार ९, २०७५
सेतापाटी संवाददाता काठमाडौं, साउन २३
नोकिया स्मार्ट फोनको आधिकारिक वितरक पारामाउन्ट इलेक्ट्रोनिक्स्मार्फत विभिन्न फोन बजारमा भित्र्याएको छ। पारामाउन्ट इलेक्ट्रोनिक्स् कम्पनीले नेपाली बजारमा नोकिया ३, नोकिया ५ र नोकिया ६ स्मार्ट फोन र नोकिया ३३१० उपलब्ध गराएको छ।
नोकिया ३ मोवाइल ५.० इन्च एच्डी डिसप्लेको रहेको छ । यसमा क्वाडकोर १.३ गीगाहर्ज, २ जीवी ¥याम, १६ जीवी इन्टरनल स्टोरेज रहेको छ । यसमा ८ एमपीको रियर क्यामेरा र ८ एमपीको फ्रन्ट क्यामेरा, प्योर एन्ड्रोइड न्युगट ओ.एस ७.० र २६३० एम.ए.एच् ब्याट्री राखिएको छ। नोकिया ३ को बजार मूल्य १५ हजार ६ सय ५० राखिएको छ।
नोकिया ५ मोवाइल ५.२ इन्च एच् डी डिस्प्ले, क्वालाकम स्नापड्रागन ओक्टा कोर १.४ गीगाहर्ज, २ जीवी ¥याम, १६ जीवी इन्टरनल स्टोरेर्ज, पुर्ण एल्मुनियम बडी भएको हुनेछ । यसमा पनि १३ एमपीको रियर क्यामेरा, फ्रिङ्गर प्रिन्ट स्क्यानर र ८ एमपीको फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ । यसमा प्योर एनड्रोइड न्युगट ओ एस् ७.१.१ र ३ं००० एम.ए.एच् ब्याट्री राखिएको छ । नोकिया ५ को मूल्य २१ हजार ३ सय ५० रुपैंयाँ तोकिएको छ।
त्यस्तै, नोकिया ६ मा ५.५ इन्च पmुल एच्डी डिस्प्ले, स्नापड्रागन ४३० चिपसेट,ओक्टा कोर १.४ गीगाहर्ज, ३ जीवी ¥याम, ३२ जीवी इन्टरनल स्टोरेज रहेको छ । यसको पुर्ण एल्मुनियम बडीले गर्दा यो निकै आकर्षक देखिन्छ । यसमा ८ एमपी फ्रन्ट क्यामेरा र १६ एम.पी. रियर क्यामेराका साथ फ्रिङ्गर प्रिन्ट स्क्यानर, प्योर एण्ड्रोइड न्युगट ओ्एस् ७.१.१ र ३००० एमएएच् व्याट्री छ। नोकिया ६ को मूल्य २५ हजार ६ सय निर्धारण गरिएको छ ।
४ वर्षको अन्तराल पछि नोकियाले पुनः आगमन घोषणा गरे लगत्तै विश्वव्यापी रुपमा नोकिया फोनको माग बढेको छ । नोकियाले नोकिया ८ पनि नेपाली बजारमा ल्याउने समेत जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २३, २०७४, ०४:३१:३७
रिट निवेदक मुद्दा हाल्दै भाग्दै, सर्वोच्च हेरेको हेर्‍यै
बिजुली गाडीको दौडमा चीन अगाडि
मोबाइलबाट महिला सुरक्षा उपाय खोज्दै प्रदेश दुई
वैभवशाली चैनपुरको शोकधुन
‘डोकोमा बिरामी बोक्नुपर्ने जनतालाई किन चाहियो ७ तले टावर?’
कतै जाँदा बाटामै दुईपांग्रे बिग्रियो?, तेस्रो चक्काले मद्दत गर्छ
६ जिबी र्‍यााम भएको हुवावेको ‘पी २० प्रो’ नेपाली बजारमा
ओप्पोको प्रोमोसनमा फूटबलर नेयमार
चौधरी फाउन्डेसनको तीन विद्यालयमा ‘डिजिटल क्लास रूम’
देशभरका १५ सय विद्यालय डिजिटलाइज्ड हुने
नेपालमै पहिलोपटक डिजिटल भिडियो प्रशारण सेवा सुरु, यस्तो छ मूल्य र सेवा
केकसँगै काटिँदैछ संस्कृति अरुणा उप्रेती
प्रधानमन्त्रीको महिला सहभागिता बिनाको समृद्धि हेर्नुछ लक्ष्मी खनाल
सार्वजनिक स्थलमा स्तनपान गराउनु अश्लिल होइन विनु रिजाल
को सर्वाेत्कृष्टः मेस्सी कि रोनाल्डो? विनोदबाबु रिजाल
कविता : प्यास मीरा प्रसाईं
रातो गुलाफको फूल राखी गौचन
म फेरि नछुने भएँ! शान्ति शर्मा
हामी सधै सम्झिरहनेछौ डा देवकोटा डा. राजन किशोरी के .सी